पेटको बोसो सजिलै हटाउन चाहाउनुहुन्छ ? यी उपाय फलो गर्नुहोस् – Sandesh Press
पेटको बोसो सजिलै हटाउन चाहाउनुहुन्छ ? यी उपाय फलो गर्नुहोस्
August 23, 2021 433
काठमाडौँ । मोटो हुन कसैलाई मन पर्दैन। प्रायःजसो सबै मानिस स्लिम र पातलो हुनै रुचाउँछन्। तथापी आधुनिक जीवनशैली र खानपानको लापरबाहका कारण मानिस मोटोपनको शिकार हुन्छन्। यस्तोमा आफ्नो शरीरको वजन कसरी कम गर्ने त ?
१) दिनको शुरुवातमा कागती पानी
यदि अनावश्यक रुपमा बढेको भद्दा शरीर घटाउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिनको सुरुवात कागती पानीबाट गर्नुहोस् । यसले पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसो कम गर्न र मेटाबोलिजम दुरुस्त राख्न मद्दत गर्दछ।
२) उसिना चामलको सेवन
यदि तपाईलाई खानामा भात नभई हुदैन भने सेतो चामलको सट्टा खैरो चामल वा उसिना चामलको भात खानुहोस् । त्यो पनि कम मात्रामा । यदि सक्नुहुन्छ भने खानामा रोटी, ब्राउन ब्रेड, ओट्सजस्ता खाद्य पदार्थ सामेल गर्नुहोस्।
३) गुलियोबाट टाढिनुहोस्
यदि मोटोपन कम होस् भन्ने चाहानामा हुनुहुन्छ भने गुलियो स्वाद वा मिठाईबाट टाढिनुहोस् । मिठाई तथा तैलीय पदार्थले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा गर्छ । यस्तो बोसो पेट, तिघ्राजस्ता शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा हुने गर्छन् र दीर्घकालसम्म रहन्छन्।
४) प्रशस्त पानी पिउनुहोस्
मोटोपन घटाउन प्रशस्त पानी पिउनु पर्दछ । मोटोपन घटाउन यो सहज, सस्तो र सुलभ उपाय हो । पानी पिउनाले मेटाबोलिजम बढ्छ र शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निस्कन्छ।
५) काँचो लसुन खानुहोस्
बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा काँचो लसुन खाने बानी बसाउनुहोस् । यसले शरीरलाई निकै फाइदा पनि गर्छ । बिहान बिहान नियमित लसुनको २–३ पोटी चपाएर कागती हालेको तातोपानीमा पिउनाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ।
६) माछामासुबाट टाढा
माछामासुजन्य मांसहारी भोजन पनि मोटोपन बढाउने कारण हुन्। यसको अत्यधिक सेवनले स्वास्थ्यसम्बन्धी बिभिन्न समस्याहरु उत्पन्न गर्छ। त्यसैले यस्ता भोजन त्याग्नुहोस्।
७) सागसब्जी बढि खानुहोस्
प्रायः मानिस भात वा रोटी धेरै खाने र तरकारी कम खाने गर्दछन्। तर खानामा प्रशस्त फल र सागसब्जी सामेल गरेमा यो माटोपन घटाउन साथै स्वास्थ्यकालागि फाइदाजनक हुन्छ। यसबाट पेट पनि भरिन्छ र एन्टीअक्सिडेन्ट, मिनरल्स र भिटामिन पनि प्राप्त हुन्छ।
८) मसलेदार खाना कम खानुहोस्
खाना पकाउँदा मसलाको प्रयोगमा कमी ल्याएमा तौल नियन्त्रण रहन सक्छ। मसलामा पनि दालचिनी, अदुवा तथा मरिचको प्रयोग गरेमा यी मसलाका कारणले इन्सुलिन क्षमता बढाउँछ र चिनीको मात्रा कम गर्छ र स्वास्थ्यमा पनि लाभ पुर्याउँछ।
Prevदीपाको जन्मदिनमा दीपकको भावुक शुभकामना, भन्छन् ‘उनी मेरो लागि सबैभन्दा माथि छिन्’
Nextकाठमाडौंमा कोरोना संक्रमित बढेपछि, गृहमन्त्रालयले जारी गर्‍यो यस्तो सुचना
खुमलटारबाट प्रचण्डबारे आयो अत्यन्तै दुखद खबर, भेटघाट समेत बन्द !
‘फुलन्देकी आमा’ को एक कलले नै मुन्द्रेको कमेडी क्लब बन्द भएको खुलासा,
मन्दिर होओस् वा घर, बत्ति बाल्दा सधै ध्यान दिनुहोस् यी ५ कुरा, नत्र हुनेछ ठुलो अनर्थ